Xog: Xaguu ku dambeeyay Hubkii lagu soo aruuriyay Hawlgalkii Xasilinta Muqdisho,? – Hornafrik Media Network
Hawgalkii Xasilinta Caasimadda ee Hubka looga dhigayay Maleeshiyaadka iyo Ciidamadda Dawladda ee Fasax la’aanta hubka ku dhex sitta wadooyinka ayaa gabi ahaanba istaagay, kadib markii ay soo baxeen Eedaymo la xiriira in hubkii la soo aruuriyay la waayay.
Xog ay heshay Hornafrik ayaa sheegaysa in Hub fara badan oo lagu soo qabtay Hawlgalkaasi oo lagu xareeyay Saldhig ay NISA ku leedahay Xarunta Xisbiga la waayay meel uu ka baxay. Waxaana Hubkaasi lagu eedeeyay Taliyaha NISA ee Gobalka Banaadir, Sadaq Joon oo ay suuragal u tahay in Xilka looga qaado arrintan darteed Maalmaha soo socda.
Hub fara badan oo isugu jira Qoryaha Fudud ee AK47, Dabajeexyo, Baasuukayaal, Dhasiikayaal iyo Agab kale ayaa la waayay, kuwaas oo sababay in Hawlgalkii Xasilinta uu sii socon waayo.
Ciidamadda Booliska iyo Milatariga ay tababareen Imaaraadku ayaa Hawlgalkan isaga baxay markii ay ogaadeen in wax la Musuq maasuqay, Waxaana ku soo koobmay Hawlgalka Ciidanka NISA oo kaliya, kuwaas oo iyaguna markii dambe sii wada waayay Hawlgalka, iyadoona arrintan ay sababtay inay Dacwooyin iska soo horjeeda Madaxda Qaranka isaga gudbiyaan Taliyayaasha Booliska iyo NISA.
Kalfadhiga Baarlamaanka oo si rasmiya uga furmay Muqdisho.